Gaalkacyooo ay ka bilaabatay dhalinyaro koox koox isku laynaysa. (Dhagayso) – Radio
November 20, 2018	106	Like
Magaalada Gaalkacyo waxaa kusoo badanayay mudooyinkii danbe dhalinyaro koox koox u socota oo dhibaataynaysa bulshada xiliyada habeenkii, dhalinyaradan ayaa u dhacaya guryaha, jidgooyana ka sameeya wadooyinka xaafadaha xiliyada habeenkii iyagoo dadka ka qaata agabka ay sitaan.
Mararka qaar waxaa dhex mara gacan ka hadal laga dareemo dhamaan xaagadaha magaalada Gaalkacyo iyagoo isku adeegsanaya budad iyo toooreeyo, waxaana dhibaato kasoo gaarta qayb ka mid ah dhalinyaradaas oo dhawacyo culus la jiifa xarumaha Caafimaadka Gaalkacyo.
Nabadoon Maxamuud Cabdiraxmaan Garas oo ka mid ah waxgarad Gaalkacyo ayaa soo booqday xafiiska warqabadka idaacada Codka Nabadda isagoo sheegay in dhalinyaradii magaalada ay koox koox isku dilayaan oo aysan jirin cid wax ka qabanaysa ama kala dhex galaysa .
Maamulka gobolka iyo degmada ayuu ku eedeeyay waxqabad la’aan baahsan oo laga dareemayo dhamaan gobolka maadaama ay ka gaabiyeen in ay kala dhexgalaaan dhalinyaradan u diriraysa koox kooxda oo dhibaateeyay shacabka gobolka.
ugu dambeyntii Garas ayaa ugu baaqay waalidka dhalay dhalinyaradan in ay u istagaan wax ka qabashada shaqaaqooyinka ay ka sameeyaan magaalada xiliyada habeenkii ah iyagoo u dhacaya guryaha.
Dhagayso Codka Garas
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kasoo horjeestay Ololaha dowladda Soomaaliya ay waddo ...